Dhagaxyada jaahilnimada ah: sifooyinka, sida ay u samaysan yihiin iyo kala soocidda | Saadaasha Shabakadda
Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee dhagaxyada dhagaxyada jilicsan. Dusha sare ee dhulkeenna waxaa ka buuxa dhagaxyo iyo macdanno kala duwan oo aad u tiro badan. Si kastaba ha noqotee, dhagaxyada jilicsan ayaa qaata muhiimad weyn tan iyo lakabka sare ee qolofta dhulka ayaa ah 95% ka kooban iyaga. Qaarkood si fiican ayaa loo yaqaan sida granite iyo obsidian, in kasta oo ay jiraan dhagxaan noocyo badan leh oo hubaal ah oo aad runtii ogtahay.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kaaga waramo dhammaan astaamaha iyo asalka dhagxaanta cirifka leh.
2 Kala soocida dhagaxyada jilicsan
3 Noocyada dhagxaanta jilicsan
3.2 Halabuurka kiimikada
Waxaa sidoo kale loo yaqaan dhagxaanta magnetic waxayna sameysmaan marka dhagaxa la shubay ee qaabka magma uu bilaabo inuu qaboobo. Waa markay qaddarkani magma bilaabmayso inay qabowdo markii macdanta ay bilaabaan inay dhagax-dhigaan oo ay is-dhex-galaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Magma waxaa lagu qaboojin karaa laba siyaabood. Dhinaca kale, waxaan ku haynaa qaboojinta dusha sare ee dhulka oo ku dhacda saameynta fulkaanaha. Hab kale oo lagu qaboojiyo waa gudaha lithosphere. Lithosphere waa lakabka adag ee dusha sare ee dhulka. Inta badan dhagaxyadaas waxaa laga sameeyaa dhulka hoostiisa waxaana loo yaqaan 'plutonic igneous rock'. Dhagaxyada ku qaboojiya dusha sare waxaa loo yaqaannaa dhagaxaanno fulkaane ah.
In kasta oo noocyada dhagxaanta ahi ay samaystaan ​​boqolkiiba aad u sarreeya qaybta sare ee qolofta dhulka, haddana waxaa badanaa laga helaa lakab ka mid ah Dhagaxyada metamorphic iyo dhagxaan fadhiisin ah. Waxay muhiimad weyn ku leeyihiin cilmiga geology-ga iyo astaamahooda iyo halabuurkoodu wuxuu caawiyaa fahamka gogosha Dhulka. Waxyaabaha ay ka kooban tahay gogosha Dhulka iyo dhammaan waxyaabihii farsamo ee la soo dhaafay waxay naga caawinaysaa inaan fahamno dhismaha iyo astaamaha meeraheenna.
Kala soocida dhagaxyada jilicsan
Aynu aragno maxay yihiin kala-saaridda u jira dhagxaanta cirridka leh. Sidii aan horay u soo aragnay, badiyaa waxaa si toos ah looga soo qaataa qaab dhismeedkooda. Haddii ay ku qaboojiyeen qaybta sare ee qolofta dhulka, waxaa loogu yeeraa dhagaxyada fulkaanaha ee dhinaca kale ah, haddii ay ku qaboojiyeen gudaha lithosphere waxaa loo yaqaannaa dhagaxyo jilicsan oo jilicsan. Plutonics sidoo kale waxaa loogu yeeraa dhagaxyo fara-galin ah tan iyo markii ay ku sameysmeen gudaha lithosphere. Halkan magma wuxuu ku qaboojiyaa geedi socod aad u gaabis ah kaas oo keena dhagxaan leh kristantarro waaweyn. Kiristaaladani si fudud ayaa loo arki karaa.
Dhagxaanta jilicsan ee loo yaqaan 'Plutonic igneous' waxaa loo qaadayaa dusha sare ee dhulka iyada oo loo marayo geeddi-socodka nabaad-guurka ama cillad tectonic ah. Waa in aynaan iloobin in dhulka dushiisa ay ka kooban tahay taarikada tektika oo dhaqaaqa. Barakaca ayaa bini aadamku ukeeni karaa laakiin waxaan kahadleynaa baaxadda waqtiga juqraafiyeed, rahyada plutonic waxaa loogu yeeraa plutons maadaama ay yihiin faragalin weyn oo magma ah oo laga sameeyay. Waa in la ogaadaa in wadnaha safafka buuraha ee ugu waawayn ay ku samaysmeen dhagaxyo faragelin ah.
Dhinaca kale, dhagxaanta fiiqan ee fidsan ama dhagaxyada fulkaanaha ayaa la sameeyaa goorta magma waxaa loo saaraa banaanka sare ee dhulka aad ayey u qaboojisaa si deg deg ah. Inta badan dhagxaantaan waxaa ka dhasha saameynta fulkaanaha iyo qaboojinta magma xawaare sare. Kiristaalo lagu abuuray gudaha dhagaxaan ayaa ka yar oo aan ka muuqan isha aadanaha. Dhagxaanta noocan ah waa wax aad u badan in la arko samaysanka godad ama godad ay ka baxaan goobooyin gaas oo ku samaysan geedi socodka adkeynta.
Marka laga reebo labadan nooc ee waaweyn waxaan kaloo haysannaa kuwo kale. Waxaa loogu yeeraa dhagaxyada reer Falastiin. Dhagaxyadan ayaa kalabar u dhexeeya midba midka kale. Marka magma weyn ay u kacdo dhinaca dusha sare oo ay sii xoojiso jidka, waxay samaysaa dhagxaanta Phylonian.
Noocyada dhagxaanta jilicsan
Aynu aragno waxa ay yihiin kala-soocyada kala duwan ee dhagaxyada jilicsan marka loo eego sida ay u dhisan yihiin iyo sida ay u samaysan yihiin
Dhagaxyada jahliga leh waxay leeyihiin qaabab soo socda:
Vitreous: waa muuqaal aad u badan oo ku dhaca dhagxaanta fulkaanaha. Dareenka waxaa loo sameeyaa iyadoo si xoog ah loogu tuuro jawiga iyo iyadoo ay saameyn ku yeelato qaboojinta xawaaraha sare leh.
Afaanik: Iyagu waa dhagaxyada fulkaanaha ee leh kareemada microscopic-ka.
Farshaxanimada: waxay ka kooban yihiin xaddi badan oo magma ah oo si tartiib tartiib ah loo dabaqay oo qoto dheer.
Duufaan Waa dhagaxyo leh kristantarro waaweyn oo ku yaal bartamaha iyo kuwa yaryar oo ka baxsan. Tani waxay sabab u tahay qaboojinta aan sinnayn. Aagga leh kristantarro waaweyn ayaa si tartiib tartiib ah u qaboojiyey, halka qaybta dibedda ee leh kiristaalo yaryar oo si dhakhso leh u qaboojiyey.
Pyroclastic: pyroclasts waxaa lagu soo saaraa qaraxyada u dhaca qaraxyada sida foolkaanaha ah. Badanaa ma laha kristantarro waxayna ka kooban yihiin jajab dhagax ah.
Calool xumada: Waa kuwa leh hadhuudh aad u qalafsan waxaana lagu sameeyaa kristantar ka badan hal sentimitir dhexroor. Waxay sameysmaan marka magma ay leedahay qadar badan oo biyo ah iyo waxyaabo kale oo isbeddela.
Aynu aragno waxa ay yihiin noocyada kala duwan ee dhagaxyada dhagxaanta leh ee kuxiran walxaha kiimikada ee mid kasta oo ka mid ahi leeyahay:
Félsicas: Waxay yihiin dhagaxyadaas oo ka kooban inta badan silica cufnaanta hoose iyo midabada fudud. Waxaan aragnaa in qolofka qaaradda uu ka kooban yahay inta badan noocyada dhagxaanta oo ay ku jiraan qiyaastii 10% silicates saafi ah.
Andesitic: waxay ka kooban yihiin ugu yaraan 25% silicates madow.
Mafic: dhagaxa noocan ah ayaa badanaa hodan ku ah silsilado madow. Waxay leeyihiin cufnaan sare iyo midabbo mugdi ah oo badiyaa sameeya qolofka badda.
Ultramafic: waxay haystaan ​​90% ka kooban isku-dhafka madow. Badanaa waa dhagaxyo dhif ah oo laga helo dusha meeraha.
Tusaalooyinka ugu wanaagsan ee la ogyahay ee dhagxaanta cirifka leh waxaan leenahay granite, oo ah kan ugu caansan plutonic. Weerarku sidoo kale waa mid ka mid ah dhagxaanta fulkaanaha ee sida weyn loo yaqaan. Sidaad arki karto, waxaa jira noocyo kala duwan oo dhagaxyo dabeyl leh oo kuxiran qaab dhismeedkooda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto dhagxaanta jilicsan iyo sifooyinka ay leeyihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Dhagxaanta jahliga